Showing 51-60 of 109 items.
वामदेव वा नारायणकाजी वरिष्ठ उपप्रधानमन्त्री बन्ने
बंगलादेशी राष्ट्रपतिको स्वदेश फिर्तीलगत्तै मन्त्री फेर्ने तयारी छ। पुनर्गठित मन्त्रिपरिषदको स्वरूप कस्तो होलारु यसबारे अनेकन कोणबाट चर्चा चल्न थालेको छ। पुनर्गठनपूर्व सबै मन्त्रीले राजीनामा दिने हो भ
उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहम्फेलाई मन्त्री बनाउने तयारी
काठमाडौँ । लामो समयदेखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही मन्त्रीहरु फेर्ने चर्चा चलिरहेको बेला उपसभामुख डा.शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई पनि मन्त्री बनाउने दुइ नेकपाका दुई अध्यक्ष विच सहमति भएको छ । मन्
करेसाबारीमा मृत शिषु फेला, एक युवति पक्राउ
पथरी । मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिका–६, स्थित रमाइलो चोकको एक खेतबारीमा गाडिएको अवस्थामा नवजात शिशु मृत फेल परेको छ । मृत शिशुको शालनालसमेत नकाटिएको अवस्थामा मंगलबार साँझ ६ बजे मेनुका दवाडीको घरको
प्रकाशित मितिः कार्तिक २१, २०७६
पेस्तोलसहित कर्मचारी पक्राउ, सुनसरीमा कार्बाही नहुदाँ गाजा खेती गर्नेहरु बढे
ब्लाष्ट । आजको ब्लाष्ट टाइम्स दैनिकमा “पेस्तोलसहित कर्मचारी पक्राउ” शीर्षकको समाचार छापिएको छ । प्रहरीले जीवन विकास लघुवित्त संस्थाका कर्मचारीसहित दुई जनालाई हतियारसहित पक्राउ गरेपछि उनीहर
नेपालमा प्रत्येक दिन सरदर छवटा जबरजस्ती करणीसम्बन्धी अपराधका घटना हुने गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५र७६ मा देशभर दुई हजार २३१ वटा जबरजस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएका छन् । उपत्यकामै घटना बढ्दैकाठम
काठमाडौं । गाउँमै स्कुलबाट कक्षा १२ सकेपछि उनी थप अध्ययन गर्नका लागि पाँच महिना अघि काठमाडौं आइन्। दिदीबहिनी मिलेर राम्रो क्याम्पस खोज्दै थिए। समय खाली थियो, जतिक्दो धेरै उपयोगी बनाउन चाहन्थे, त्यसैले
तिहारको मिठाईले बिगार्ला स्वास्थ्य ?कस्तो खाने कति खाने ?
काठमाडौं । चाडपर्वका साथै पूजाआजाका बेला मिठाई तथा सेल रोटीको माग एवं प्रयोग बढी हुन्छ । बजारमा प्रशस्तै मिठाईं पसल देख्न सकिन्छ जहाँ विभिन्न थरीका हेर्दै लोभ लाग्दा, रंगीबिरंगी तथा आकर्षक मिठाईंहरू ब
थुन नै नभएको गाइले पायो बाच्छा
रंगेली । मोरङको रंगेली नगरपालिका ८ चाईना गेटमा अनौठो गाई फेला परेको छ । मन्जौ मण्डलको घरमा दुई बर्ष अगाडि दाईजोको रुपमा बाछी ल्याए । बाछी ल्याएपछि परिवारमा खुसी छायो। सानैदेखि बाछीको स्याहारसुसार गरेर
काठमाडौं, । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग खटपटपछि नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल नजिकिन थालेका छन्। उनीहरूले मंगलबार बेलुकी पार्टी राजनीतिका विषयमा केन्द्रित रही दाहाल नि